Mark Gurman ku calaamadee muraayadaha AR iyo VR | Waxaan ka socdaa mac
Mark Gurman wuxuu ka hadlayaa muraayadaha AR iyo VR
Kuwa la yaqaan Mark Gurmann, sii wado soo bandhigida iyo bixinta macluumaadka alaabada soo socota ee ka socota shirkadda Cupertino. Xaaladdan oo kale, waxay ka tagaysaa Mac, iPhone iyo iPad dhinac si toos ah diiradda loo saarayo alaabada kale ee muddo dheer naloo xamanayay.
Aaladda Xaqiiqada leh (AR) iyo muraayadaha Virtual Reality (VR) ama koofiyadaha Waxay qeyb ka ahaayeen warar xan ah sanado badan. Waxaan xasuustaa xaddiga wararka ku saabsan muraayaddan Apple markii qalab noocan oo kale ah caan ka noqday Shirweynihii Adduunka ee Moobilka sanadkii 2016. Runtu waxay tahay inaysan si buuxda u shaqeyn inkasta oo markii aad tijaabisay "wow!" Waxay bixiyaan waa mid aad u fiican, qiimaha, gaar ahaan muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay, ayaa loo baahan yahay in la yareeyo si loo gaaro dhammaan qaybaha iyo isticmaalayaasha.
Sannado badan oo xan iyo sanado badan oo ka mid ah suurto galnimadeeda iyo toddobaadkan tan iyo Bloomberg Waxay sii daayeen dhowr xan oo ku saabsan suurtagalnimada alaabada Apple ee sanadkan. Tan dhexdeeda Gurman wuxuu ka hadlayaa jiil cusub oo muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah iyo dhagaha, sidaas darteed horumarinta kuwani wali waa wax dhab ah Apple.
Isticmaalayaasha, sii wadida inay ka shaqeeyaan qalabka noocan ah had iyo jeer waa wax wanaagsan tan iyo markii aan xasuusano in dhibaatada ugu weyn ee muraayadahaan xaqiiqda ah ee la kordhiyay ay badanaa tahay qiimaha sare ee ay ku leeyihiin suuqa, sidaa darteed haddii Apple ay maamusho inay soo saarto wax soo saar xiise leh Iyo cadaalad qiimaha wuxuu noqon karaa riixitaanka ugu dambeeya ee noocyada aaladaha. Xaqiiqdii waxaa jira muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee aad ku dari karto moobiilka gudihiisa oo aad "dareemi karto" wax ka mid ah muraayadaha sida Vive ama dalab la mid ah, laakiin markaad isku daydo Vive-ka waxaad ogaanaysaa sida xun ee kuwani ay yihiin oo aad ku dari karto casriga.
Waxaas oo dhami waxay qaadan doonaan wakhti ay ku soo baxaan iftiinka iyo Marka loo eego saadaasha Gurman, waxay qaadan doontaa ugu yaraan hal ama laba sano illaa aan ka aragno suuqa noocyada aaladaha Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mark Gurman wuxuu ka hadlayaa muraayadaha AR iyo VR
Patent-ka Apple wuxuu ku dhejiyaa kaamirooyinka suunka Apple Watch